Akụkọ - gbazee ndị anaghị efe efe -the isi akụrụngwa nke ihe nkpuchi
Ikuku Afọ Ihe nkiri Na-anwụ
Agbaze Fụọnụ Non kpara Die -the isi akụrụngwa nke nkpuchi ihe
Mgbaze ahụ gbazee bụ etiti oyi akwa nke nkpuchi. Fiber dayameta bụ naanị otu ụzọ n'ụzọ iri atọ nke ntutu isi. Ya mere, ọ nwere ike iyo mgbasa nke nje na nje. A na-akpọ ya "obi" nke nkpuchi. Ọnụ ego nke imepụta ihe na-agbaze agbaze na-abụkarị ọtụtụ nde, usoro mmepụta ahụ dịkwa ọtụtụ iri nde, ọ na-achọ ọzụzụ pụrụ iche maka ndị ọrụ, ọnụ ụzọ ụlọ ọrụ ahụ dị elu. Karịsịa, ihe ndị bụ isi nke usoro mmepụta, gbazee ndị nwụrụ anwụ na spinnerets, enweghị
Nchịkọta nke nkà na ụzụ na-eme ka o sie ike ịrụ ọrụ a dị mkpa.
Ihe ziri ezi nke nhazi oghere dị elu. The eriri dayameta nke gbazee-fụọ ákwà bụ 0,5 na 10 microns. N'oge usoro extrusion nke oghere spinneret, ịdị n'otu na nkwụsi ike nke isi anwụ na-arụ ọrụ mkpebi na ihe nke akwa gbazee. Na usoro nke 1.6-mita n'ogologo-gbazee-fụọ anwụ, isi karịa 2500 kwesịrị ịkụ ọkpọ na ahụ nwụrụ anwụ
Akara, njupụta ya na ịdị n'otu nwere ihe ndị achọrọ siri ike. Njehie nke oghere ọ bụla dị ihe dịka 0.3MM. Njehie ahụ agafeghị 2%: oghere nkwụsị bụ 0.01um-0.03um iji ruo ọkwa enyo ahụ, enweghịkwa ike ịdahie na nhazi. Jingwei engineer team, na-asị nwere ihe karịrị afọ iri nke teknuzu ahụmahụ
Ojiji nke igwe ihe eji emeputa ihe ohuru, ya na nkenke nkenke teknụzụ na ebe a na-emepụta spinnerets maka eriri sịntetik ruo ọtụtụ afọ, na-aga n'ihu na mgbanwe nke teknụzụ.